Izixazululo Zezimboni |
I-KT Udizili Generator
I-KT Cummins Series Udizili Generator
I-KT Perkins Series Udizili Generator
I-KT Deutz Series Udizili Generator
I-KT Doosan Series Udizili Generator
I-KT KUBOTA Series Diesel Generator
I-KT Mitsubishi Series Diesel Generator
KT Yangdong Series Udizili Generator
I-KT SDEC Series Udizili Generator
KT Yuchai Series Udizili Generator
I-KT MTU Series Udizili Generator
KT Yanmar Series Udizili Generator
KT ISUZU Series Udizili Generator
I-KT Ricardo Series Diesel Generator
I-KT Generator Encane
KT negesi Generator Setha
KT igesi Generator Yemvelo isethiwe
Isethi ye-KT Biogas Generator
I-KT High-Voltage Generator
Izingxenye ze-Diesel Generator
Izingxenye zeCummins Generator
Izingxenye ze-MITSUBISHI Generator
Izingxenye ze-Perkins Generator
Izingxenye ze-Yangdong Generator
Amacala aphesheya kwezilwandle
Ukuphazamiseka kwamandla kumanethiwekhi wesitimela akuyona nje into ephazamisayo; futhi ziyizinsongo ezinkulu kwezempilo nokuphepha. Uma amandla engasekho esiteshini sesitimela, uhlelo lomlilo, uhlelo lokuphepha, uhlelo lwezingcingo, uhlelo lwezimpawu, kanye nohlelo lwedatha luzowa. Isiteshi sonke sizongena enkingeni nasethusweni ...
I-Power Plants Generator Set Kent Power inikeza isixazululo samandla esiphelele sezitshalo zamandla, ukuqinisekisa ukunikezwa kwamandla okuqhubekayo uma kwenzeka isitshalo samandla siyeka ukuletha amandla. Imishini yethu ifakwe ngokushesha, ihlanganiswe kalula, isebenza ngokuthembekile futhi iletha amandla amaningi. Amandla kagesi asebenzayo ...
IKent Power inikela ngogesi odonsa ngodizili osetshenziselwa ezempi ukuhlangabezana nezidingo zobuchwepheshe zemizimba yamazwe omhlaba. Amandla asebenzayo futhi athembekile abalulekile ukuqinisekisa ukuthi inhloso yezokuvikela iqedwa ngempumelelo ngangokunokwenzeka Ama-generator ethu asetshenziswa kakhulu njengamandla aphambili ngaphandle, ...
Isixazululo se-Outdoor Projects Setha uKent Power wamaphrojekthi wangaphandle aqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu kokuhlola kanye nenqubo yezimayini. Ngokuya ngokusebenza, ukusebenza nokugcinwa kwesethi ye-generator, izakhiwo zangaphandle zinezidingo eziqinile kumasethi we-generator. UKent Power une ...
Isixazululo Samandla Samandla Ka-Oyili iKent Power inikeza iphothifoliyo ephelele yezixazululo zokuvikela amandla ezinkambu zikawoyela. Ukukhishwa kukawoyela negesi kuvame ukutholakala ezindaweni ezikude ezinezindawo ezinabantu abambalwa, futhi lezi zindawo kanye negridi yamandla engaba sengozini enkulu kuleyo ndawo ...
I-Generator Set Set Solution Esibhedlela, uma kwenzeka ukusilela kohlelo, kumele kuhlinzekwe amandla aphuthumayo okuphepha impilo kanye nemithwalo ebucayi yamagatsha ngemizuzwana embalwa. Ngakho-ke izibhedlela zinamandla kagesi afunwa kakhulu. Amandla ezibhedlela akuvumeli nakancane ukuphazamiseka futhi kufanele kube yi-p ...
Isikhungo seTelecom neDatha
Ama-generator we-Telecom Power asetshenziswa kakhulu eziteshini ze-telecoms embonini yezingcingo. Imvamisa, i-generator isetha ama-800KW adingeka esiteshini sesifundazwe, futhi i-generator ibeka ama-300KW kuya ku-400KW adingeka esiteshini sikamasipala, njengoba amandla okulinda akhulisa i-Telecom Power Solution Ukusetshenziswa kwama-generator ha ...
Isakhiwo sihlanganisa uhla lwasendle, kufaka phakathi izakhiwo zamahhovisi, izakhiwo zamabhilidi, izindawo zokuhlala, amahhotela, izindawo zokudlela, izinxanxathela zezitolo, izikole, njll. Izakhi Generator Setha Isixazululo Ukwakha Cove ...
I-Generator Yamabhange Isethi yama-generator edizili amele utshalomali oluningi lwezezimali nokwethembeka kwawo, ikakhulukazi lapho kukhona amasethi e-generator yokulinda, kubaluleke kakhulu. Amabhange anezinombolo ezinkulu zamakhompyutha athuthukile nezinye izinto zokusebenza, ezingasetshenziswa kuphela ku ...
Isixazululo Samandla Ezimayini Ngokuvamile ama-generator kagesi asetshenziswa njengomthombo wamandla oyinhloko wokuphila kwansuku zonke, ubunjiniyela endaweni yezimayini. Isixazululo samandla eKent sezimayini siqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu kokuhlola kanye nenqubo yezimayini. Sinikezela ngezinhlelo zamandla ezinokwethenjelwa kanye nokulethwa okusheshayo, okungakhulisa isikhathi sokuphumula ...